Carine...nahazo 17/20 tamin’ny BACC, ho any Etazonia!
Carine Ratsirahonana, 17 taona, mianatra ao amin’ny Saint Francois Xavier Fianarantsoa no nahazo ny naoty ambony indrindra manerana an’i Madagasikara, 17, 92/20 ny naotiny
tamin’ny fanadinana bakalorea farany teo. Inona no tsiambaratelony amin’ny fanalana fanadinana ? Andeha ho arahina ny resadresaka niarahana taminy.
Tovovavy tena tsotra sy somary saro-kenatra i Carine Ratsirahonana. Tsy nanana olana loatra izy tamin’ny fotoana nanatanterahina ny fanadinana bakalorea ofisialy. « Atao toa ireny manao fanadinana any am-pianarana ireny ihany, hoy izy, dia mihena ny fitaintainana ». Ary hita fa nahomby taminy izany satria rehefa nivoaka ny valim-panadinana dia afaka soa aman-tsara ny tenany.
Tsy nanampo ahazo naoty ambony
« Mention Très bien » no azony tamin’izany. Efa ambony indrindra amin’ny sokajy nizarana ireo mpianatra izay afaka izany, ary famantarana fa manana naoty tsara dia tsara ny mpianatra iray matoa mahazo io « mention » io. « Tsy nanam-po ny ahazo ilay naoty ambony indrindra erak’i Madagasikara aho”, hoy i Carine. « Efa nikendry ny ahazo io « mention très bien » io aho, tamin’ny nianatra fa ny naoty no tsy nampoiziko ». Tamin’ny fotoana niantsoan’ny minisiteran’ny fampianarana azy ireo mantsy no nilazana taminy, ny naoty azony. Tamin’io fotoana io ihany koa, izay natrehan’ny solombavambahoaka Siteny, mpitarika ny « Fondation Siteny » no nilazan’ity farany fa ho isan’ireo mahazo ny fanomezana ho any Etazonia ny tenany.
Hiazo an’i Etazonia
Nanomboka teo dia nikarakara ny pasipaoro sy ny taratasy rehetra ho entina amin’izany dia izany i Carine sy ny reniny. Fivahinianana any Etazonia moa izy io, mandritra ny 15 andro ka hisy ny fitsidihana an’i Washington mandritra ny andro vitsy ary hijanona ao Parisy ihany koa, hitety toerana maromaro ao izay vao hiverina eto an-tanindrazana indray.
Maniry ahazo vatsim-pianarana any ivelany
Fanirian’ny reniny, ny ahafahan’i Carine manohy ny fianarany any am-pitan-dranomasina. « Finance et comptabilité » no taranja tian’ity zanany ity ho atao sy halalilinina. Nandritra ireo fotoana maro nahafahana nihaona tamin’ireo tomponandraikitra, hoy ny renin’i Carine dia efa niezaka hatrany izy ny hitady lalana ny amin’ny ahafahana mahazo vatsim-pianarana ho an-janany mankany am-pita. Varavarana misokatra ny fandraisana an-tanana nataon’ny Fondation Siteny fa mbola tsy nisy mihitsy kosa ny dingana izay nataon’ireo avy amin’ny fanjakana. Efa nametraka ny antontan-taratasy rehetra ilaina eny amin’ny CONABEX izahay, hoy ihany ny reniny, ka miandry valiny aloha no sady mifampiresaka amin’ireo tomponandraikitra mety afaka hanosika io fahazoana vatsim-pianarana io ihany.
Efa nahay hatramin’ny kely
I Carine moa dia tovovavy efa nahay hatramin’ny kely, araka ny fitantaran’ny reniny. Tsy nanana olana firy izy teo amin’ny fianarana fa arahi-maso fotsiny ny fanaovana enti-mody. « Ezahina ho azo ao am-pianarana hoy i Carine ny lesona, mihaino ny fanazavana rehetra ka « excercice » fotsiny sisa no atao any an-trano fa tsy mianatra lesona be intsony »
Ny gazety Jejoo dia mankasitraka sy mirary soa an’i Carine.